news Archives - Galmada.net
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa toddobaadka soo socda booqasho ku tegi doona dalka Hindiya, sida ay baahisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dalka Hindiya. Booqashadan oo qaadan doonta muddo shan casho ah ayaa wuxuu wasiirku la kulmi doonaa dhiggiisa dalka Hindiya Sushma Swaraj, isagoo kala hadli doona arrimo dhawr ah oo ay ka […]
Xogahaya Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Dowladda Maraykanka ay ka go’antahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay higsanayso iyo in ay kala shaqayso dadaallada ay dowladda Federaalka Soomaaliya ku cirib tireyso argagaxisada. Mdane Tillerson oo khadka teleefoonka kula hadlay Madaxwaynaha Jamhuuriyadda ayaa u xaqiijiyay in Maraykanka uu si […]
Warar ay baahiyeen Wargeysyada mucaaradka Turkiga ayaa sheegaya in dowlada Turkiga ay Hub iyo Gaadiid dagaal u daad gureyneyso dalka Qadar. Hubka iyo Gaadiidka ayaa la sheegay inay saanad Militery u tahay ciidamada Turkiga ee dhawaan la geeyay dalka Qadar. Wargeysyada ayaa sheegay in qeybo kamid ah Hubka iyo Gaadiidka loogu deeqay Qadar, si ay […]
Daawo: Boqorka Sucuudiga oo Wiilkiisa u magacaabay Dhaxal-Sugaha Boqortooyada Dalkaas
Daawo: Boqorka Sucuudiga oo Wiilkiisa u magacaabay Dhaxal-Sugaha Boqortooyada Dalkaas Boqorka Sacuudiga, Salman ayaa wiilkiisa 31 jirka ah ee Mohammed bin Salman u dallacsiiyey dhaxal-sugaha boqortooyada, isaga oo ka dhigay ninka ugu horreeya liiska qofka xiga ee noqonaya boqorka. Mohammed Bin Salman ayaa sidoo kale sii ahaan doona wasiirka gaashaandhigga, isaga oo dushana kala socon […]